नेपालको सबै भन्दा ठुलो म्युचअल फण्डको इन्स्योरेन्समा लगानी कति ? – Insurance Khabar
नेपालको सबै भन्दा ठुलो म्युचअल फण्डको इन्स्योरेन्समा लगानी कति ?
प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७५, बुधबार १३:१६
नेपालमा हाल १३ वटा म्युचअल फण्ड संचालनमा छन् भने सबै भन्दा ठुलो ईकाई निस्काशन गरी सबै भन्दा ठुलो म्युचअल फण्ड सिद्धार्थ म्युचअल फण्ड अन्तर्गतको सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड रहेको छ । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको कोषको आकार १ अर्ब ५० करोड छ । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड पछि दोश्रो ठुलो म्युचअल फण्ड सानिमा इक्वीटी फण्ड रहेको छ । सानिमा इक्वीटी फण्डको कोषको आकार १ अर्ब ३० करोड छ ।
फाल्गुन महिना सम्मको सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले उपलब्ध गरेको तथ्याङ्क अनुसार फण्डको प्रति ईकाई खुद मूल्य १० रुपैयाँ ७३ पैसा छ । माघ महिना सम्म फण्डको प्रति ईकाई खुद मूल्य १० रुपैयाँ ६२ पैसा थियो । प्रति ईकाई खुद मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ ।
सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले कुल ६४ करोड ७३ लाख रुपैया सुचिकृत कम्पनीको शेयरहरुमा लगानी गरेको छ ।
सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमा लगानी कति ?
सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले ७ करोड ८६ लाख बराबरको रकम इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका छ । फण्डले १० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका छ । १० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी मध्य फण्डले ३ जीवन बीमा कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छ भने ७ निर्जीवन बीमा कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छ ।
फण्डले सबै भन्दा धेरै नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा लगानी गरेको छ । फण्डले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको २२ हजार ४ सय ७० कित्ता शेयरमा लगानी गरेको छ ।
उपलब्ध तथ्यांक अनुसार फण्डले २ करोड ४८ लाख बराबरको नेपाल लाईफको शेयर होल्ड गरेको छ । फण्डले आफ्नो सुचिकृत कम्पनीहरुको शेयरमा गरेको कुल लगानीको १२ प्रतिशत लगानी इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमा गरेको देखिन्छ ।